Shariif Xasan Oo Doonaya in Lasoo hormariyo doorashada madaxweynaha (Warbixin) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shariif Xasan Oo Doonaya in Lasoo hormariyo doorashada madaxweynaha (Warbixin)
Shariif Xasan Oo Doonaya in Lasoo hormariyo doorashada madaxweynaha (Warbixin)
Shariif Xasan oo ku hanweyn in mar un uu Madaxweyne noqdo ayaa juhdi ku bixinaya sidii uu ugu guuleysan lahaa damaciisa ku aadan sidii loo soo hormarin lahaa doorashada Madaxweynaha ee ku qorsheysan inay dhacdo 30-ka bishan.
Waxaa uu horay ugu guuldareystay soo jeedin uu sameeyay intii lagu guda jiray shirarkii Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran ee ka dhacay Muqdisho bilo ka hor, kaasoo ahaa in la soo hormariyo doorashada Madaxweynaha.
Inta badan Madaxda Madasha ayaa ku gacan seyray damaca Shariif Xasan ee ahaa in doorashada Madaxweynaha la soo hormariyo, si ay ugu suurta gasho inuu isku soo sharaxo xilka Madaxweynaha.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in Shariif Xasan ka dhaadhicinayo xubno ka tirsan Beesha Caalamka sidii doorashada Madaxweynaha u dhici laheyd waqtigiii loo qorsheeyay, si aanay mar kale dib u dhac ugu imaan.
Shariif Xasan ayaa ka cabsi qaba in hadii nin ka soo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle loo doorto Guddoomiye Baarlamaanka ay meesha ka saari karto isku daygiisa Musharaxnimada Madaxweynaha, sidaasna uu is reeb reebka uga harayo.
Mr Shariif Xasan ayaa sanadkii 2012 isku soo sharaxay xilka Madaxweynaha, balse hamigiisa waxaa meesha ka saaray Jawaari oo loo doortay Guddoomiye Baarlamaank, waxaana uu haatan doonayaa inuu ka ilaaliyo xilka Guddoomiye Baarlamaan siyaasi ka soo jeeda beeshiisa.
Lama oga sida uu ku hirgeli karo qorshaha Shariif Xasan uu wato ee ku saabsan in doorashada Madaxweynaha la soo hormariyo, ama waqtigeeda ku dhacdo, iyadoo horay Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran isku raaceen in ugu horeyn la qabto doorashada Guddoonka Baarlamaanka.
Guddiga doorashooyinka ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo bandhigaan jadwal cusub oo ku saabsan doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha, maadaama waqtigii horay loo qabtay aanay ku dhici karin, dib u dhacyo jira awgeed, waxaana laga yaabaa in bartamaha bisha December la qabto.